Torohevitra 3 hanampy anao handoa ny dia
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Torohevitra 3 hanampy anao handoa ny dia
Fiona [email voaaro] mod 700x343 1
Manonofy hahita an'izao tontolo izao ianao, fa ahoana no andoavanao izany? Ity nofy ity dia mety ho toa lavitra kokoa raha trosa ianao. Mahereza olona maro mitete izao tontolo izao, ary vitsy amin'izy ireo no milionera. Misy paikady isan-karazany azonao ampiasaina hanampiana anao hahay handanjalanja ara-bola ary hihatra amin'ny làlana malalaka.
Alamino ny volanao
Misy zavatra vitsivitsy tadiavinao hialana mandritra ny dia ataonao, ary ny iray amin'ireo dia ny krizy ara-bola. Midika izany fa raha tsy nitadidy manokana momba ny volanao ianao dia tsy maintsy manova izany. Tsy te ho tratry ny tsy ampoizina tsy ampoizina ianao toy ny faktioran-ketra na haingo avy amin'ny mpampindram-bola hadinonao rehefa lavitra ny trano ianao. Raha sahirana amin'ny trosa amin'ny carte de crédit ianao, dia mety te hijery fampindramam-bola manokana hanafoana izany trosa izany. Ny fampindramam-bola manokana dia afaka manolotra zana-bola ambany kokoa anao noho ny carte de crédit, izay mety manana taha 18% na avo kokoa. Ireo mpampindram-bola dia nanao ezaka bebe kokoa hanatsarana ity fomba ity ary afaka mifanaraka amin'ny safidy indram-bola ao anatin'ny iray minitra ianao.
Amidio ny zava-drehetra
Betsaka ny olona mamatsy vola ny diany any ivelany amin'ny fivarotana ny fananany rehetra. Raha efa niaina fiainana milamina tsara ianao, dia mety tsy hanam-bola be izany aminao, fa raha manana trano sy fiara ianao, dia mety afaka mandeha mandritra ny taona maro amin'ny vola azo. Tadidio fa mila vola miditra ihany koa ianao, koa raha manantena hanana trano sy fiara indray andro any ianao dia aza laniana daholo. Na dia mikasa ny hiaina fiainana tsotra kokoa aza ianao amin'ny fiverenanao na tsy azonao antoka ny fotoana sy ny toerana hipetrahanao indray, dia mbola mila vola ianao hanofana trano vaovao sy hahazoana fanaka sy zavatra hafa.
Miasà rehefa mandeha
Ny miasa ny lalanao manerana an'izao tontolo izao dia fomba iray malaza indrindra hamatsiana ara-bola ny dia. Indray mandeha dia mety hidika fomba fanao somary alokaloka ity, mandray asa tsy ara-potoana ary mandray karama eo ambanin'ny latabatra any amin'ireo firenena izay tsy nanana fahazoan-dàlana, fa amin'izao andro izao, miaraka amin'ny afindra amin'ny asa lavitra mandritra ny areti-mandringana, na mety hiaraka hanao fifanarahana tsy miankina amin'ny mpanjifa isan-karazany ianao. Manomboka amin'ny famolavolana tranonkala hatramin'ny fianaranao fiainana, ny fanoratana amin'ny programa ary maro hafa, misy asa marobe azonao atao amin'ny Internet izay hahazoanao vola ampy hijanonana mandritra ny fotoana tsy voafetra. Ary aza manisa io standby taloha io, mampianatra anglisy. Azonao atao ny mampianatra fampianarana an-tserasera na an-tserasera amin'ireo karazana mianatra isan-karazany arakaraka ny safidinao. Ity koa dia iray amin'ireo asa ara-dalàna mora indrindra azonao atao any ampitan-dranomasina any amin'ny firenena maro raha mpandahateny teratany ihany koa ianao. Zavatra mety tianao hojerena raha mijanona amin'ny toerana iray mandritra ny volana vitsivitsy na herintaona ary lasa anisan'ny fampiharana eo amin'ny fiarahamonina